Tantaran’i Fidencio Sanchez Manasongadina Ny Aingam-Panahy Tsara Indrindra Ao Amin’ny Media Sosialy —Sy Ny Manjò Ireo Latinô Mpifindra-monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2016 15:30 GMT
Fidencio Sanchez, 89 taona, manosika ny sarety fivarotana ‘glace’ manodidina ny fari-tanànakely iray ao Chicago. Vao haingana izy no saika hisotro ronono saingy tsy maintsy niverina niasa mba hivelomana rehefa maty ny zanany vavy. (Sary :Joel Cervantes Macias / GoFundMe)
Nahita lehilahy paletero Meksikana iray 89 taona antsoina hoe Fidencio Sanchez i Joel Cervantes Macias teraka tao Chicago raha nandeha fiara ho any amin'ny tanàna be rivotra (anarana nomena ny tanàna Amerikana Chicago). Ao Meksika, ny paletero dia lehilahy mpivarotra irony glace sy esquimaux amin'ny saretikely atosi-tanana antsoina hoe paletería eny an-dalambe irony. Nifindra monina ho any Etazonia avy any Meksika i Fidencio ampolony taona vitsivitsy lasa izay. Tena variana tamin'ny fiezahan'ilay lehilahy manosika ilay saretikely mavesatra manerana ny tanàna i Cervantes ka nalainy sary ilay mpivarotra. Nalefany tao tamin'ny Facebook izany ary nasiany fanehoan-kevitra hoe: “Manaja ity lehilahy ity tanteraka aho.”
Niresaka naharitra tamin'i Fidencio i Cervantes rehefa avy naka ny sary sy nividy glace. Nilaza taminy ilay paletero fa nodimandry vao haingana ny zanany vavy ka namela azy hiandraikitra ny zanany roa. Tsy maintsy miasa isan'andro i Fidencio raha tsy izany tsy ampy ny vola mba hamelomany ny zafikeliny sy ny vadiny. Tohina i Cervantes . Fantany fa mila manao zavatra izy amin'izany. Ny namany iray, antsoina hoe Joe Loera, no nanan-kevitra ny hanomboka fanentanana an-tserasera mba hanangonana vola ho amin'ny “fisotroan-drononon'ny mpiara-monina iray” ho an'ity lehilahy miasa mafy ity.
Namoy ny zanany vavy tokana vao haingana Atoa Fedencio Sanchez sy ny vadiny ary mbola vaky fo momba ny zava-nitranga. Nivarotra paletas ny vadiny vaviantitra mba hanampiana ihany koa amin'ny fandoavana faktiora kanefa narary izy ka tsy afaka miasa intsony. Hanao ezaka isika mba hanangonana vola hanampiana azy ireo araka izay azontsika atao. Afaka manampy ny zava-drehetra. Andao isika hanao tolo-tanàna sy hanampy hahatonga ny fiainany ho mora kokoa ka hampihiratra ny andron'izy ireo.
Noeritreretina ho 3.000 $ Amerikana teo tany am-boalohany ny tanjon'ny fanentanana GoFundMe. Nahagaga anefa fa tonga 13.000 $ Amerikana izany tao anatin'ny efatra ora voalohany. Olona 17.000 no nandray anjara nandritra ny fanentanana ary nahazo mihoatra ny 380.000 $ Amerikana ny fanentanana.
Nanao fanehoan-kevitra mankahery sy tsara maro momba ny fanampiana azon'ilay paletero ireo mpisera Twitter any Etazonia sy any Meksika sady nampiasa tenirohy isan-karazany toy ny #FidencioSanchez sy ny #JoelCervantesMacias:
Tara-masoandro tao anatin'ny herinandro mafy. Misaotra an'i #JoelCervantesMacias noho ny fampahatsiahivany ny vahoaka ny maha-olombelona azy ireo. fitiavana avy amin'i #FidencioSanchez- mendrika izany ianao https://t.co/FZUb4KxCzt
Reko ny momba ity tantara ity ary tsy maintsy nandray anjara aho… Andriamanitra anie hitahy io lehilahy io sy an'i Joel Cervantes Macias izay … https://t.co/Wrnt04dGwW
Ny fotoana tsapa nahafinaritra rehetra ho an'ny #Chicago #SMB! Arahabaina ary ankafizo ny fisotroan-dronono amin'ny paleta Fidencio Sanchez! pic.twitter.com/FWk4EGyvFg
Nametraka fanehoan-kevitra tsara ny ankamaroan'ireo mpisera ao amin'ny media sosialy. Na izany aza, nandinika ny olana lalina mifandraika amin'ny Meksikana sy ny Latinô mpifindramonina hafa ao Etazonia ny bilaogera sy mpanao gazety. Ohatra, namoaka lahatsoratra iray amin'ny marina mampalahelo ao ambadiky ny fahaosan'i Fidencio ny mpanangom-baovao solontenan'ny fantsona TV Fusion, Juan Rivas, indrindra fa ny fanavakavahana an'ireo Meksikana hita tamin'ny fifidianana tao Etazonia :
Nanamarika ny zavatra maro atrehan'ireo beantitra Latinos ihany koa i Rivas: tsy ampy ny vola voaangona hanaovana fisotroan-dronono. Mampalahelo, mbola ratsy kokoa ny zava-isy raha olona mipetraka any Etazonia tsy manana antonta-taratasy io olona io:
Miaina anaty fahantrana ny iray ampaha-dimin'ny olondehibe mpifindra monina tsy misy taratasy, araka ny hitan'ny Foibem-Pikarohana Pew. Ary matetika tsy mahatahiry fisotroan-dronono ireo olona miady mafy isian'ny sakafo hohaniny isaky ny alina.
‘Mitady izay hohaniny isan'andro ireo ‘mpivarotra eny an-dalambe,’ hoy i Martin Unzueta, tale mpanatanteraky ny Chicago Community and Workers’ Rights (Zon'ny Fiarahamonina sy ny Mpiasa ao Chicago), vondrona iray miara-miasa amin'ireo mpivarotra an-dalambe. Misy ireo mpivarotra an-dalambe no manana karatra fiarovana ara-tsosialy kanefa izany tsy midika fa afaka mandefa vola [ fisotroan-dronono] any amin'ny Fitantanan-draharahan'ny Fiahiana Ara-tsosialy izy ireo.’
Michele Chen, avy amin'ny fikambanam-baovao prôgresista TruthOut, nandinika ny fitantaran'i Fidencio, ary nanasa ny mpamaky ny lahatsorany mba hieritreritra momba ny tsy fitoviana atrehan’ ireo mpifindramonina tsy fotsy hoditra maro ao Etazonia. Namolavola vahaolana maharitra ihany koa izy izay mety hanampy ny olona toa an'i Fidencio “mba hiaina amim-pahamendrehana” rehefa tena mila izany izy ireo:
Mihoatra ny GoFundMe, mila fotodrafitrasa mamela azy ireo hiaina am-pahamendrehana ireo zokiolona mpifindramonina. Amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fikarakaran'ny fanjakana ireo vondrom-piarahamonina beantitra no hiavian'ny tena vahaolana — ary fanorenana indray ny fiahiana ara-tsosialy mahatsapa ny drafitra fanavakavahana sy ny tsy rariny ara-tantara. Tokony hampisy fangorahana ny mahita zokiolona iray tahaka an'i Sanchez manosika ny saretiny , kanefa tsy vintan-dratsy fotsiny izany, fa fanamafisana ny tsy fitoviana, izay zakain'ny vatan'ireo zokiolona mpifindramonina reraka.
Ny fiahiana ara-bola manan-danja no dingana fototra mankany amin'ny rariny, miaraka amin'ny fepetra fanalefahana trosa sy ny fanampiana ara-pitsarana hiadiana amin'ny fahoriana noho tsy fananam-pialofana sy ny fandroahana ireo fiarahamonina tsy fotsy hoditra. Ny fihanaky ny fanilikilihana, ny fitotongan'ny toekarena, ny firangorangoana naharitra ampolotaonany, ny fakana karama mialoha sy ny rafitra fanjanaham-bola atao amin'ireo vondrom-piarahamonina mahantra ary mihatra amin'ireo Latinos zokiolona avo roa heny mihoatra noho ny mihatra amin'ireo beantitra fotsy mitovy taona aminy .